Followers အားပေးသူများ အထူး အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
World Clock-ကမ္ဘာ့နာရီစင် ကြည့်ချင်ရင် Click
ကျနော် ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ စာတွေကို ပြန်လည် မျှဝေပါသည်..... ရှာကြည့်ပါ
အကြမ်းဖက်ဖို့မဟုတ်ဘူး..အမှန်တရားအတွက် ကျနော်တို့ ဘာကိုကြောက်နေရမှာလဲ...
Andrew Myo Aung
အကြမ်းဖက်ဖို့မဟုတ်ဘူး..အမှန်တရားအတွက် ကျနော်တို့ ဘာကိုကြောက်နေရမှာလဲ....ဗိုလ်မှုးကျော်စွာဝင်းရဲ့စကားဟာ တကယ်ကိုမှန်ကန်လွန်းတဲ့စကားပါ.." ကျနော်ပြောချင်တာ ကျနော် နောက်တစ်ကြိမ် ထောင်ထဲပြန်ဝင်ဖို့ မကြောက်ဘူး..အခု မီဒီယာတွေရော..တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးကိုပြောမယ်..ပြောချင်တယ်..#အမှန်တရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ #ထောင်ကိုကြောက်နေမယ်ဆို#ဒီမိုကရေစီဘယ်တော့မှမရနိုင်ဘူး...အမှန်တရားနဲ့ပတ်သက်လာရင် ထောင်ကိုမကြောက်မှ ကျနော်တို့နိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီရမယ်..အားလုံးကိုပြောချင်တာက အထူးသဖြင့် #အမေစုကိုဝန်းရံကြပါ..#NLDကို #မဲပေးကြပါ"..
Posted by Mr.7Cho or
စားသုံးသူမားအတွက် အရေးကြီးတဲ့စားစရာ များကို စစ်ဆေးဝယ်ယူနိုင် ဖို့ 
Myanmar Believe Collect News
စားသုံးသူမားအတွက် အရေးကြီးတဲ့စားစရာ များကို စစ်ဆေးဝယ်ယူနိုင် ဖို့နဲ့ အခု တစ်လော စားစရာအချို နာမည်ကြီးကုန်အမှတ်များ နဲ့ဆင်တူရိုးမှား လုပ် လာ ပီး ဈေးကွက် မှာ ဖြန့်နေတာရယ်သူတို့ပစည်းများကို စစ်ဆးတော့ သံသယဖြစ်စရာတွေပါ တွေ့ ရလို့စားသုံးသူများ စစ်ဆေးကြဖို့နဲ့အန္တရယ် ကို ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ဖို့ ဖေါ်ပြလိုက်ပါတယ်သေချာဖတ်ပီးမှတ်သားထားကြပါ မိတ်ဆွေများကိုလဲသိအောင်ပြောပြပေးပါ ဒါမှမရိုးမသား သူများကို ဖယ်ရှားနိုင်မှာပါ တို့ တွေ ခံရတာ ဗဟုသုတနဲ ကြ မသိကြလို့လဲပါပါတယ် ...
၁၇ အရွယ် လူငယ်တစ်ဦး တီထွင်ခဲ့သော သွေးတိတ်အဆီ
Andrew Myo Aung added3new photos — with Kathryn Aungand Van Hnuai Kim.
>>၁၇ အရွယ် လူငယ်တစ်ဦးတီထွင်ခဲ့သော သွေးတိတ်အဆီ<<<=======================
သင် ဒဏ်ရာတစ်ခုကြောင့် သွေးထွက်လွန်နေတယ်ဆိုပါစို့..။ ရုတ်တရက် ချက်ချင်း သွေးမတိတ်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်..။
အဲ့ဒီ့လို အချိန်မျိုးမှာ အဆီတစ်ခုကို ဒဏ်ရာပေါ်ကို သုတ်လိမ်းလိုက်ရုံနဲ့ စက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်းမှာ လုံးဝ သွေးတိတ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်..။ တစ်မိနစ်အတွင်မှာ ဒဏ်ရာဟာ (အနာကျက်ပြီး) သက်သာပျောက်ကင်းသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြောင်းမြမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အပုတ်ချတဲ့ စာဝေတာ ကြံ့ ဖွတ် ဌေးဦးနဲ့ မဘသတချို့ ပေါင်းလုပ်ကြတာလေး ပြောပြချင်ပါတယ်။
မြောင်းမြမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အပုတ်ချတဲ့ စာဝေတာ ကြံ့ ဖွတ် ဌေးဦးနဲ့ မဘသတချို့ ပေါင်းလုပ်ကြတာလေး ပြောပြချင်ပါတယ်။ဇာတ်လမ်းအစကတော့ ဟသာင်္တ မိုးကောင်းဆရာတော်ကြီး ဘဒ္ဒန္တ သုဓမ္မရာဘိဝံသ အသက်တော် ၈၀ ပြည့် မွေးနေ့ ပွဲ ဒုတိယနေ့ ည ရွှေတိပိဋကမော်ကျွန်းဆရာတော်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပုတ်ချတရားဟောတာ ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲကို ဌေးဦးနဲ့ သိန်းအောင် ၂ယောက်လုံး လာကြပါတယ်။ အဲ့ဒီတရားခွေကို ဌေးဦးက တောင်းပြီး မြို့ နယ်ဖွံ့ ထောက်ဥက္ကဌ ဦးအေးချိုက အခွေကူးပြီး လှူပါတယ်။မိုးကောင်းဆရာတော်က ၃ ညလုံး ဟောမယ့် ဆရာတော်တိုင်းကို ဒါဟာ ပဋိယတ္တိစာသင်တိုက်၊ စိတ်ထဲ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဟောလို့ ရတယ်။ ပြဿနာ မရှိပါလို့ပြောပြီး ဟောခိုင်းပါတယ်။ တရားပွဲ ၃ ည မှာ တပါးစီကို တစ်သိန်းလှူတဲ့ အလှူရှင်က ဒုတိယညမှာတော့ တရားပွဲဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အပုတ်ချတရားနဲ့ ကုလားအကြောင်းဘဲမို့ နားမခံသာတော့ဘဲ မလှူနိုင်တော့ပါဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတော့တယ်။
ဒေါ်စု ကို ၀န်းရံကြရန် ထောင်မှပြန်လွတ်လာသည့် ဗိုလ်မှူးကျော်စွာဝင်း တိုက်တွန်း
Maung Tun Wai added3new photos.
ဒေါ်စု ကို ၀န်းရံကြရန် ထောင်မှပြန်လွတ်လာသည့် ဗိုလ်မှူးကျော်စွာဝင်း တိုက်တွန်း///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ပုဒ်မ ၄၃၆ ပြင်ဆင်ရေး လက်မှတ်ထိုးလို့ ထောင် ၂ နှစ်ကျခဲ့တဲ့ ဗိုလ်မှူး ကျော်စွာဝင်းဟာ သမ္မတရဲ့ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်နဲ့ ဒီနေ့ ပြန်လွတ်လာပြီး ထောင်က လွတ်လာလာချင်းလုပ်တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ၀န်းရံဖို့နဲ့ အန်အယ်လ်ဒီကို မဲပေးကြဖို့ တိုက်တွန်း နှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်။
ဇူလိုင် ၃၀ ရက် မန္တလေးမြို့ Mr. 88 cafe မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ သူက ခုလိုပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီး အဲ့ဒီပွဲမှာပဲ သူ့အနေနဲ့ အန်အယ်လ်ဒီပါတီဝင်ဖို့ အဆိုပြုပြီး ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်မယ့်အကြောင်းလည်း ထုတ်ပြောခဲ့ပါတယ်။
သမ္မတကြီးသို့ ပေးစာ Yae Tay Za
သမ္မတကြီးသို့ ပေးစာ ===============သို့..သမ္မတကြီး...ခင်ဗျားက နားမကောင်းတာလား ?ဦးနှောက်မကောင်းတာလား ?ကျနော်ထင်တာက နှလုံးမကောင်းတာလားလို့ပါ..ရေပင်လယ်ကြီးထဲက စားစရာမရှိ၊ နေစရာမရှိနဲ့ ဘယ်အချိန် ရေနစ်သေမလဲလို့ စိုးရိမ်နေကြရတဲ့ အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကို ထိထိရောက်ရောက်ကယ်တင်ဖို့ မစီစဉ်ပဲနဲ့အပြစ်ရှိလို့ ခင်ဗျားတို့အစိုးရကပဲ အပြစ်ပေးထားတဲ့ အပြစ်သားတွေကိုကျတော့ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ဆိုတော့ခင်ဗျား စိတ်ထင်...
Zaw Myint Aye
သူမကို နားမလည်ကြသူများ==================(၁)ကမ္ဘာကျော်ရုပ်ရှင်မင်းသမီး (Angelina Jolie)အင်ဂျလီနာဂျိုလီဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရ မြန်မာပြည်ကိုလာပြီးဦးသိန်းစိန် ဦးရွှေမန်းတို့နဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုEMG သတင်းပေ့ခ်ျတွေမှာဖတ်လိုက်ရပါတယ်၊သတင်းတွေအရဆိုရင်...ဂျိုလီဟာ ကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့ပါမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်....
၂၀၁၅ အတွက် ဟောကိန်းကို လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ကြီးကို ထုတ်လိုက်ပါပြီ။
သူ ဇာ added2new photos.
၂၀၁၅ အတွက် ဟောကိန်းကို လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ကြီးကိုထုတ်လိုက်ပါပြီ။သူ့နာမည်က ဆပ်ပန် ဆိုတဲ့ စင်္ကာပူက တရုတ် ခရိုနီ တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။သူက ဧရာဝတီ မဂ္ဂဇင်းနဲ့အင်တာဗျူးမှာမြန်မာ့ စီးပွားရေး ပေါက်ကွဲမယ်လုို့ ဟောကိန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်။ထူးခြားတာကမြန်မာ့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ အနောက်နိုင်ငံတွေက ပညာရှင်များကသာ အရင်က ဟောကိန်းတွေ ထုတ်ခဲ့ကြပြီးယခု ၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွက်အာရှဒေသ မြန်မာနိုင်ငံနှင့်လည်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၈၀၀ လောက် ကုန်သွယ်ဖက် ဖြစ်နေတဲ့စင်္ကာပူမှ နာမည်ကြီး ခရိုနီကဟောကိန်း ပြတ်ပြတ်သားသား ထုတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
စစ်လော်ဘီများမရေးရဲသော စာစုများ (၁)
စစ်လော်ဘီများမရေးရဲသော စာစုများ (၁)============================ပထမတန်းစားဆိုတဲ့မင်းတို့ရဲ့ဆရာတွေဇိမ်ခံနေတဲ့အချိန် မင်းက စုတ်ပြတ်နေတဲ့ ဘဝတွေထဲမှာရုန်းကန်နေရတာကို တွေ့တော့ငါရင်နာတယ်..ရဲဘော်......သစ်ခိုးထုတ်တဲ့သူတွေကို လိုက်ရင်းဆွဲမိုင်းထိလို့ အသက်ပေးလိုက်ရတဲ့ရဲဘော်တွေမြင်တော့မင်းတို့ အသက်နဲ့လဲကာကွယ်လိုက်တဲ့ ရလာဒ်ဟာရှစ်ရက်ပဲခံတာ သိလိုက်ရတော့ငါရင်နာတယ်..ရဲဘော်...
Ko Nyo added2new photos.
ရေဘေးဒုက္ခသည်တွေကို ဦးတေဇတို့လို ခရိုနီတွေ၊ စစ်ခေါင်းဆောင်ဟောင်းတွေ၊လက်ရှိအစိုးရနဲ့အတူ KNUနဲ့ KIAအဖွဲ့တွေကပါ အားကျိုးမာန်တက် ထောက်ပံ့ကူညီပေးသင့်တယ်။သူတို့ ကြွယ်ဝအောင် တူးဆွဖြိုဖျက် ရိတ်သိမ်း ခုတ်လှဲခဲ့သမျှ ပြည်သူတွေ ခံစားခဲ့ရတာမမေ့ပါနဲ့.။
စစ်အစိုးရအဆက်ဆက်ရဲ့ ဓာတ်ငွေ့၊ လောင်စာဆီနဲ့ လျှပ်စစ်ဓာတ်ကို ပြည်ပသာထုတ်ရောင်းပြီး ကိုယ့်နိုင်ငံအတွင်း လုံလောက်အောင်မဖြည့်တင်းခဲ့မှု၊မြေတွင်း ကျောက်မျက်ရတနာထုတ်နိုင်ဘို့ တောင်တွေဖြို ချိုင့်ဝှမ်းတွေပေါ်အောင်လုပ်ခဲ့သမျှ၊ရေရှည် ပြဿနာကိုမတွေးပဲ ဆည်မြောင်း၊ ရေလှောင်တာတမံတွေ အမြော်အမြင်မဲ့ တည်ဆောက်ခဲ့တာကလည်း ရေလွမ်းမိုးမှုတွေပေါ်ပေါက်စေသလို..စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ အတ္တအကျိုးသာကြည့်ပြီး နိုင်ငံအနှံ့ သစ်ခုတ်လှဲမှု၊ ဒီကနေ့အထိ ထင်းမီးလောင်စာပဲ အသုံးပြုနေမှုတွေက အခုလို ရေလွမ်းမိုးမှုကို လက်တွေ့ သက်သေပြသလိုက်တာပါ.။
သမ္မတနဲ့ လွှတ်တော်ဥက္ကဌ အားပြိုင်မှုမှသည် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပာတီအကွဲအပြဲ
ရွေးကောက်ပွဲနီးလာသည်နှင့်အမျှ သမတဦးသိန်းစိန်နှင့် လွှတ်နာယက သူရဦးရွှေမန်းအကြား အားပြိုင်မှုသည်ကား ကြီးထွားသထက် ကြီးထွားလာနေပြီဖြစ်သည်။ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအတွက် ထင်ရှားသော အပေါင်းလက္ခဏာဆောင်သော အလှည့်အပြောင်းတစ်ခုပေါ်ထွက်လာမည့် အလားအလာဖြစ်သလို ဘယ်နည်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဆိုသည့်စိတ်ဓါတ်များဝင်လာပြီး အစွမ်းကုန်ညစ်ပတ်လျှင်ကား တပ်မတော်ကိုအသုံးချ၍ (တပ်မတော်ကလည်း အသုံးချခံခဲ့လျှင်) တိုင်းပြည်အတွက် ရလာဒ်ဆိုးထွက်ပေါ်လာနိုင်ပြီး နိုင်ငံရေးအကြပ်အတည်းကြီးဆီသို့လည်း ရောက်သွားနိုင်ပြန်သည်။
အဲဒီစိတ်ကူးအိပ်မက်ကို အကောင်အထည်ဖော်ပါ။ Nine Nine Sanay @ နိုင်းနိုင်းစနေ
လူတိုင်းမှာ စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေရှိကြတယ်။ တချို့က ကမ္ဘာကြီးကိုပတ်ဖို့၊ တချို့က ကော်ဖီဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ဖွင့်ဖို့။ သင့်ရဲ့စိတ်ကူးအိပ်မက်ဟာ ဘာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေ သတ္တိရှိရှိစိတ်ကူးပါ။ ပြီးရင် အဲဒီစိတ်ကူးအိပ်မက်ကို အကောင်အထည်ဖော်ပါ။ Read more »
အရေးကြီးတာက အဲဒီမြေပေါ်မှာ ငါတို့ရဲ့စိတ်ကူးအိပ်မက်ကို စိုက်ပျိုးရဲ မရဲဆိုတာပါပဲ"
၁၈၆၇ ခုနှစ်မှာ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး William H. Seward ဟာ ဒေါ်လာ ၇.၂ မီလီယံနဲ့ ရုရှားနိုင်ငံရဲ့လက်ထဲကနေ အလက်စကား (Alaska) ကိုဝယ်ယူခဲ့တယ်။ ဝယ်ယူခဲ့စဉ်တုန်းက လွှတ်တော်မှာ ပြင်းထန်တဲ့ဝေဖန်ငြင်းခုန်သံတွေ မပြတ်ခဲ့ဘူး။ တချို့လွှတ်တော်အမတ်က သူ့ကို "Williamရဲ့ လူပြိန်းလုပ်ရပ်"လို့ ဝေဖန်ခဲ့ကြတယ်။ တကယ်လည်း အဲဒီတုန်းက အလက်စကားဟာ သဲဗွက်နဲ့ လေကြမ်းတွေကလွဲလို့ ဘာမှမရှိတဲ့အရပ်ဖြစ်တယ်။ ရှားစောင်းပင်နဲ့ ပူးကောင်တွေ ရှိခဲ့တဲ့အရပ်ဖြစ်တယ်။
၃လအရွယ်ကလေးငယ် လက်ကိုင်ဖုန်း Flashမီးကြောင့် မျက်စိကွယ်၊ ကလေးများအတွက် share ပေးပါ
Lwin Pyin added2new photos.
3 hrs · ၃လအရွယ်ကလေးငယ် လက်ကိုင်ဖုန်း Flashမီးကြောင့် မျက်စိကွယ်၊ ကလေးများအတွက် share ပေးပါ----------
များမကြာမီရက်များက လူတစ်ဦးသည် ၃လသားအရွယ်ကလေးအား ဓာတ်ပုံရိုက်ပေးရာတွင် လက်ကိုင်ဖုန်းရှိ flash မီးအားပိတ်ရန်မေ့သွားခဲ့သည့် အပြင် အကွာအဝေးအလွန်နီးကပ်သွားကာ ကလေးငယ်မျက်နှာနှင့် နို့ဘူးလောက်သာဝေးကွာသောကြောင့် ကလေးငယ်၏ ဘယ်ဘက်မျက်လုံးအမြင်အား ၁.၂ နှင့် ညာဘက်မျက်လုံးအမြင်အား ၀.၂ထိပဲရှိလောက်အောင်ထိခိုက်သွားခဲ့သည်။
===========ကျောင်းက ပြန်လာတဲ့ သူငယ်တန်းကျောင်းသားလေးကို သူ့အမေက မေးတယ်... ..."ပထမဆုံးကျောင်းတက်ရက်မှာ ပျော်ရဲ့လား သားသား""ဂျာ... ပထမဆုံးရက် ဟုတ်လား၊ ဒါဆို နောက်ရက်လည်း သွားရအုံးမယ်လို့ ဆိုလိုတာလား"
ရေနဲ့ မောင်းမယ့် Mercedes-Benz Ener-G-Force
ရေနဲ့ မောင်းမယ့် Mercedes-Benz Ener-G-Forceဂျာမနီ Mercedes မှ ရေနဲ့မောင်းမယ့် Concept ကားတစ်စီးကို လော့အိမ်ဂျ လစ် မော်တော်ယာဉ် ပြပွဲမှာ ဝင်ရောက် ပြသ သွားခဲ့ပါတယ်။တကယ်ထူးထူးခြားခြားပါပဲ။ ရေနဲ့မောင်းမယ်ဆိုတော့ ကားရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်က ဘယ်လိုလည်းလို့ အများက စိတ်ဝင်စားကြပါတယ်။ အသုံးပြုတဲ့ အင်ဂျင်က hydro-tech converter ဖြစ်ပါတယ်။ ရေထဲမှာ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကို ထုတ်ယူပြီး ပါဝါဆဲလ်အဖြစ် ဖန်တီးလို့ ကားကို မောင်းပေး မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ အိတ်ဇောပိုက်မှာ ထွက်မယ့် အငွေ့က ကာဘွန်ဒိုင် အောက်ဆိုက်မဟုတ်ပဲ ရေငွေ့များ ဖြစ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဇီဒန်းနဲ့ ဖိနပ် သင်ခန်းစာ. YoYarLay
ဇီဒန်းနဲ့ ဖိနပ် သင်ခန်းစာ. ကမ္ဘာကျော် ပြင်သစ် ဘောလုံးအားကစားသမားဟောင်း ဇီဒန်းက ယခုလို ပြောခဲ့ပါတယ်။ "ကျွန်တော် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဘောလုံးကန်ဖို့ ရှူးဖိနပ်မရှိတော့ ငိုဖူးတယ်။ ဒါပေမယ့် ခြေထောက်မရှိတဲ့ လူတစ်ယောက်ကို မြင်တော့ ကျွန်တော် ခြေထောက်နှစ်ဖက်ရှိသေးတဲ့အပေါ်မှာ ကျေနပ် ရောင့်ရဲသွားမိတယ်။"
နှလုံးသား အစာ အဟာရ
ယမမင်း၏ခွေးရေပုရပိုက် - The Scroll
နောက်ဆုံးပါးကွက်သား-------------ထိုင်းနိုင်ငံမှာ သေဒါဏ်ကျခံရသူတွေကို သေနတ်နဲ့ပစ်သတ်ပေးရတဲ့ အလုပ်ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာ လုပ်ခဲ့တဲ့ လူတစ်ယောက်က သူ့အလုပ်မှာ အမှတ်တရဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းတချို့ကို ကိုယ်တိုင်အင်္ဂလိပ်လို ကြိုးစားပြီးရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာရေးဆရာတယောက်က အချောပြန်ကိုင်ထားပေးထားတာပါ။ ဒီစာအုပ်မှာ အမှတ်ရနေတဲ့ အရေးအသားကတော့ နှလုံးနေရာမှားရောက်နေတဲ့ ဘိန်းကုန်ကူးသူ အမျိုးသမီးကို သေနတ်နဲ့ ပစ်...အပြီး သေပြီအထင်နဲ့ ရင်ခွဲရုံကို သယ်တဲ့လမ်းမှာ သေနတ် ဒါဏ်ရာတွေနဲ့ သွေးရူးသွေးထပြေးတဲ့ အဲ့ဒီအမျိုးသမီးအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။
လူ့ဘောင် လူ့အဖွဲ့အစည်းတိုးတက်ဖို့အတွက် စာဖတ်တဲ့ငတုံးငအတွေ အများကြီးလိုပါတယ်။
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတိုးတက်ဖို့ စာဖတ်တဲ့လူငယ်အများအပြားလိုအပ်တယ်။ စာဖတ်ခြင်းက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အသိဉာဏ်၊ တွေးဆဆင်ခြင်နိုင်စွမ်းတွေပေးနိုင်ရုံတင်မက အဲဒီနိုင်ငံတိုးတက်ဖို့အထောက်အကူပြုတဲ့ အင်အားအရင်းအမြစ်လည်းဖြစ်တယ်။----
White Madonna lily အပြစ်မဲ့ခြင်းကို ပြန်လည်ရရှိပါစေ Tint Swe
White Madonna lily အပြစ်မဲ့ခြင်းကို ပြန်လည်ရရှိပါစေ မနေ့ကကွယ်လွန်သွားသူတဦးအတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နေပို့တဲ့ လွမ်းသူ့ပန်းခြင်းမှာ လီလီပန်းတွေနဲ့ဖြစ်တယ်။ ကွန်မင့်ရေးသူတွေကလည်း ကောင်းကောင်းသတိထားမိကြတယ်။Lilies လီလီပန်းသမိုင်းက ဘီစီ ၁၅၈ဝ ကတည်းကနေစတယ်။ Crete ခရိကျွန်းမှာ ရှေးဟောင်းဂရိဒဏ္ဍာရီထဲမှာပါတယ်။ ဂရိစာလုံး Leiron ကနေလာတယ်။ White Madonna lily အဖြူရောင်မက်ဒိုနာလီလီပန်းကို ဆိုလိုပါသတဲ့။ နတ်ဘုရားေ...တွရဲ့ ဘုရင်မ Hera ဟီရာရဲ့ နို့ရည်ကနေလာတယ်လို့ ဖွဲ့ဆိုပါတယ်။ မေလရဲ့ပန်းနဲ့ နှစ် (၃ဝ) ပတ်လည် မင်္ဂလာပန်းလို့လည်း သတ်မှတ်ထားတယ်။ Read more »
ကြောက်နေရင် တစ်သက်လုံးရှုံးမှာပဲ...ကြွက်တစ်ကောင်ဟာ ကြောင်ကိုကြောက်နေခဲ့ရလို့ အမြဲမပျော်နိုင်ဖြစ်နေခဲ့တယ်။ ဒါကို ဖန်ဆင်းရှင်ကကိုယ်ချင်းစာပြီး သူ့ကို ကြောင်တစ်ကောင်ဖြစ်စေလိုက်တယ်။ ကြွက်ဟာ ကြောင်ဖြစ်သွားပြီးတဲ့နောက် ခွေးကိုကြောက်နေခဲ့ရပြန်တယ်။...ဖန်ဆင်းရှင်က သူ့ကို ခွေးတစ်ကောင်ဖြစ်စေလိုက်တယ်။
အသားတံဆိပ် (သို့မဟုတ်) ခေတ်မှီမှုရဲ့အဆုံး၊ ပျက်သုန်းခြင်းရဲ့နိဒါန်း၊ ဗျာဒိတ်၏ ပြည့်စုံခြင်း ( အပိုင်း-၂ နိဂုံး)
Ko Nyo added4new photos.
အသားတံဆိပ်(သို့မဟုတ်)ခေတ်မှီမှုရဲ့အဆုံး၊ ပျက်သုန်းခြင်းရဲ့နိဒါန်း၊ ဗျာဒိတ်၏ ပြည့်စုံခြင်း( အပိုင်း-၂ နိဂုံး)
ကျနော်တို့ လက်ကိုင် မိုဘိုင်းဖုံးတွေကိုင်ဆောင်တဲ့အခါ ကိုယ် ဘယ်ရောက်နေတယ်ဆိုတာ အဲဒီဖုံးထဲမှာလမ်းညွှန်ပြသလို၊ တမြို့နဲ့ တမြို့၊ တနိုင်ငံနဲ့ တနိုင်ငံ ရောက်နေတာကိုလည်း မိုဘိုင်းကုမ္မဏီက အလိုအလျှောက်သိနေပါတယ်။နည်းပညာတိုးတက်မှုတွေက ကိုယ့်လွတ်လပ်မှုကို ထိမ်းချုပ်ထားတယ်။ခေတ်ကြီးဟာတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့အတူ လွယ်ကူပြီးသက်သာ၊ အဆင်ပြေမှု ဆီရွေ့ လျှားနေတာဖြစ်တယ်။
အထူးသဖြင့် တိုးတက်မှုကိုလိုလားတဲ့ လူငယ်တွေဟာ ခေတ်ရေစီးရဲ့ ပေါ်ပင်တွေအပေါ် လိုက်ပါတတ်တယ်။ အခုအသားတံဆိပ်ဟာ နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတဲ့ ဆွီဒင်နိုင်ငံမှာတောင် ဒီနှစ်ဆန်းကမှစပြီး၂၀၀ ပဲထုတ်လုပ်ပါသေးတယ်။စတော့ဟုမ်း မိုက်ခရိုချိ(ပ်)လို့ခေါ်တယ်။ အရွယ်ဆိုဒ်က ၁၂မီလီမီတာလောက်သာရှိတယ်။ မိမိကိုယ်ပိုင်မှတ်ပုံတင်နံပါတ်၊ ဘဏ် နံပါတ်၊ လှို့ဝှက်ဂဏန်းတွေထည့်ထားတယ်။မိမိမိုဘိုင်းဖုံးနဲ့လည်း ဆက်သွယ်နိုင်တယ်။လူစိတ်ဝင်စားပြီး အခက်အခဲနဲ့ အဆင်ပြေ၊မပြေ အနေအထားတွေကို သုသေသနလုပ်ထားတာမို့ ပြင်ဆင်မှုတွေနဲ့အတူ နောက်လာမယ့် ၂၀၁၆မှာ ၂သိန်းလောက် ထုတ်လုပ်မယ်လို့ သိရတယ်။
အသားတံဆိပ် (သို့မဟုတ်) ခေတ်မှီမှုရဲ့အဆုံး၊ ပျက်သုန်းခြင်းရဲ့နိဒါန်း၊ ဗျာဒိတ်၏ ပြည့်စုံခြင်း ( အပိုင်း-၁)
အသားတံဆိပ်(သို့မဟုတ်)ခေတ်မှီမှုရဲ့အဆုံး၊ ပျက်သုန်းခြင်းရဲ့နိဒါန်း၊ ဗျာဒိတ်၏ ပြည့်စုံခြင်း( အပိုင်း-၁)
ဆွီဒင်နိုင်ငံရဲ့ အလည်တည့်တည့်ကျတဲ့ မြို့လေးဖြစ်တဲ့ ဟူဒစ်စ်ဗားလ် Hudiksvall မြို့လေးဟာ သက်တမ်း၄၀၀လောက်ရှိပါပြီ။လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၂၀၀လောက်က ဂျာမန်တွေ တိုက်ခိုက် မီးရှို့ပြီးဖျက်ဆီးခံရတဲ့နောက် ပြန်လည်တည်ဆောက်နိုးထလာတဲ့ မြို့လေးဖြစ်တယ်။ ငြိမ်းချမ်းပြီး လှပသာယာတဲ့ ဟူးဒစ်စ်ဗားလ် မြို့လေးရဲ့ မြန်မာလိုအဓိပ္ပါယ်က ပျော်ရွှင်ခြင်း ဖြစ်တယ်။
ကျန်းမာချင်ရင် NLD ကိုသာမဲပေးပါ
Vote for changeကျန်းမာချင်ရင် NLD ကိုသာမဲပေးပါကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးမှသတ်မှတ်ထားသော နိုင်ငံအလိုက် ကျန်းမာရေးစနစ်အဆင့် (၂ဝဝဝ) WHO က ဒီစာရင်းနောက်မှာ အသစ်မထုတ်တော့ပါ။အဆင့် တိုင်ပြည်1 France2 Italy3 San Marino4 Andorra5 Malta6 Singapore7 Spain8 Oman9 Austria10 Japan11 Norway
HIV survival outside the body ကိုယ်အပြင်မှာ HIV ဘယ်လောက်ကြာရှင်သလည်း
HIV survival outside the body ကိုယ်အပြင်မှာ HIV ဘယ်လောက်ကြာရှင်သလည်းHIV ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဟာ လူ့ကိုယ်ခန္ဓာထဲကနေထွက်လာရင် ရောက်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေအပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ရှင်သန်နိုင်တယ်။ တချို့နေရာတွေမှာ ရက်သတ္တပါတ်တွေအထိရှင်တယ်။ တချို့နေရာတွေမှာ ဒီလောက်ကြာကြာ မရှင်နိုင်ပါ။ သူတို့ရှင်သန်နိုင်စွမ်းဟာ ကိုယ်ကနေထွက်တဲ့အရည်တွေအပေါ်မှာမူတည်တယ်။ အရည်ထုထည် ဘယ်လောက်များသလည်း။ အရည်ရဲ့အပူချိန်၊ အက်စစ်ဓါတ်၊ ရေငွေ့ဓါတ်နဲ့ နေရောင်။
နိုင်ငံရေး စိတ်ဝင်စားသူတိုင်း ဖတ်ကြည့်စေချင်သော စာတစ်ပုဒ်။
ဘုန်းထက် ကြယ် added2new photos.
ဒီကဗျာလေးကကိုမင်းကိုနိုင် ရေးခဲ့တဲ့ ကဗျာလေးဖြစ်ပြီးဘာကို ဆိုလိုတယ်ဆိုတာ အားလုံးပဲ သဘောပေါက်ကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ် ။
အမျိုးသမီးဟာ ဒီလိုနဲ့ပဲအိုမင်းသွားခဲ့တယ်. . .-----------------------------------------------------မိန်းမရဲ့တစ်သက်က ခက်ခဲတဲ့တစ်သက်ဖြစ်တယ်။သမီးတော်အဖြစ် အနှစ် ၂ဝ၊ မိဖုရားအဖြစ် ၁ရက်၊ တော်ဝင်မင်းသမီးအဖြစ် ၁ဝလ၊ အထိန်းတော်အဖြစ် တစ်သက်.. ဒါဟာ မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့တစ်သက်တာဖြစ်တယ်။ မိန်းမအများစုဟာ ဒီလိုနဲ့ပဲအိုမင်းသွားခဲ့ပါတယ်။မိန်းမဟာ ကလေးငယ်ကိုပွေ့ချီထားပြီး နွားနို့ကျိုနေတယ်၊ အဝတ်လျှော်နေတယ်။ ဆပ်ပြာတွေပေနေတဲ့လက်နဲ့ နဖူးထက်ကချွေးတွေကို သုတ်ရင်း “အင်း.. အခုအချိန်မှာ ကလေးငယ်သေးတယ်၊ ကလေးကြီးလာရင် ငါလည်းအားလပ်ချိန်လေးတော့ရှိလာမှာပါ”လို့ တွေးတယ်။
ကို စိန် သန်း added3new photos.
6 hrs · ဦးအောင်သောင်းနဲ့ သားတွေကြွယ်ဝသမျှ ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာများသာ
ဆယ်စုနှစ်များစွာကြာ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကို အဆုံးသတ်လိုက်ပြီးနောက် မြန်မာနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာ့အဆင်းရဲဆုံး နိုင်ငံစာရင်းဝင် သွားသည်နှင့် ပြောင်းပြန်အချိုးညီစွာ ချမ်းသာကြွယ်ဝပြီး ကျန်ရစ်ခဲ့သူများတွင် ခရိုနီများနှင့်အတူ ဝန်ကြီးဟောင်း၊ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းများလည်း ပါဝင်သည်။
ပြည်သူများ၏ လက်ထဲမှ ခိုးယူခံရသည့် မြန်မာပြည်၏ သဘာဝ သယံဇာတများမှ ရရှိသော အကျိုးအမြတ်များ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းကြီးများသည် ခရိုနီများ၏ အိတ်ထဲတွင် ရှိနေသည်ဆိုပါလျှင် ယင်းမှာ စုစုပေါင်း၏ ထက်ဝက်ဖြစ်နိုင်ပြီး ကျန်ထက်ဝက်မှာ ဝန်ကြီးဟောင်း၊ ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်း ခရိုနီ မိသားစုများ၏ အိတ်ထဲတွင် ရှိနေပေသည်။
ဒီမင်းသားကို သိကြလားNixau ( Gcao Tekene Coma ) လို့အမည်ရတဲ့ တော်အာဖရိက လူရိုင်း မင်းသား ကို တော်တော်များများ သိကြပါတယ်။တောင်အာဖရိက- နမီးဘီးယားနိုင်ငံက ဖြစ်ပြီး ၁၉၈၀ ကစလို့ The Gods Must Be Crazy ရုပ်ရှင်နဲ့ ကမ္ဘာကျော်သွားတဲ့ လူရိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။ Kalahari သဲကန္တာရမှာနေတဲ့ Bushmen လူရိုင်းမျိုးနွယ်စု က ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါရိုက်တာ Jamie Uys က သဘောကျလို့ ရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့ ကမ်းလှမ်းခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အများကြီးမပြောဘူးဗျာ လူနှစ်ယောက် အကြောင်း၊ တစ်နည်းအားဖြင့် မာတုရနှစ်ပါးပေါ့။
Kolynn Kolynn added4new photos.
အများကြီးမပြောဘူးဗျာလူနှစ်ယောက် အကြောင်း၊ တစ်နည်းအားဖြင့် မာတုရနှစ်ပါးပေါ့။
ပထမတစ်ယောက်ကတော့အီရတ်နိုင်ငံက ဖြစ်ပါတယ် ။ကြိုးပေးခံရတဲ့ တစ်ယောက်ပါ။
ဘာကြောင့်လဲ ? ဘာအပြစ်ရှိလို့လဲ?
သူ့ကိုမေးတယ်''မင်းခရစ်တော်ကို စွန့်လွတ်မလား? '' ဒါမှမဟုတ် '' အသေခံမလား '' တဲ့။
တစ်ခါတည်းမေးတာမဟုတ်ဘူးနော်။အထပ်ထပ်မေးတာ. . .။
အထပ်ထပ်ငြင်းခဲ့တယ်။ ''ငါယေရှုခရစ်တော်ကို ကိုးကွယ်တာမစွန့်လွတ် နိုင်ဘူး ၊အသက်ပဲ အသေခံသွားမယ်''ဆိုပြီး သေမဲ့လမ်းကို ရွှေးချယ်ခဲ့တယ်။
ချဉ်ပေါင်ဖူး၏ အကျိုးကျေးဇူးများ-===================ကိုယ်အလေးချိန်ကို ထိန်းပေးခြင်းချဉ်ပေါင်ဖူးမှာ HCA (hydroxycitric acid) လို့ ခေါ်တဲ့ သြဂဲနစ် အက်စစ်ပမာဏ များစွာ ပါဝင်တာကြောင့် ကိုယ်အလေးချိန် လျော့ကျရေး ဖြည့်စွက်ဆေးထဲမှာ လတ်တလော ထည့်သွင်းပြီး သုံးနေကြောင်း ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင် ချဉ်ပေါင်ဖူးမှာ ဗီတာမင်စီနဲ့ အစွမ်းထက် အင်တီအောက်ဆီးဒင့် အန်သိုဆိုင်ယာနင် နှစ်မျိုးစလုံး များစွာ ပါဝင်ပါတယ်။ရောဂါဝေဒနာကို ခုခံနိုင်စွမ်းရှိခြင်း Read more »
ဦးသန်းရွှေ၏မြေး ဖိုးလပြည့်မှ ပြည်သူ့ ဝန်ထမ်းယာဉ်ထိန်းရဲ တစ်ဦးအား လက်သီးနဲ့ ထိုး၊ ပါးရိုက် ၊ရုံးခန်း အတွင်းခေါ်ယူနှိပ်စက်ပြီး မိုက်ရိုင်းစွာပြုမူခဲ့
မြန်မာ့အလင်းရောင်-News & Religion ဦးသန်းရွှေ၏မြေး ဖိုးလပြည့်မှ ပြည်သူ့ ဝန်ထမ်းယာဉ်ထိန်းရဲ တစ်ဦးအား လက်သီးနဲ့ ထိုး၊ ပါးရိုက် ၊ရ...
ယုံကြည်ခဲ့သော အချစ်…. (ဖြစ်ရပ်မှန် ရင်နင့်ဖွယ်ရာ ဇာတ်လမ်း)
Zuri's Beauty Hub ယုံကြည်ခဲ့သော အချစ်…. (ဖြစ်ရပ်မှန် ရင်နင့်ဖွယ်ရာ ဇာတ်လမ်း) -------------------------- --------------------- ----...
Myawady News "အပျိုစင်”ဆိုတဲ့ စကားလေး(၃)ခွန်းဟာ စကားအရာ(၃)ခွန်းဆိုပေမယ့် ထိန်းသိမ်းရတာတော့ ခက်ပါလားနော် အမေကမွေးပြီးအချိန်မှစလို...
Ko Nyo ရွေးကောက်ပွဲနီးလာသည်နှင့်အ မျှ သမတဦးသိန်းစိန်နှင့် လွှတ်နာယက သူရဦးရွှေမန်းအကြား အားပြိုင်မှုသည်ကား ကြီးထွားသထက်...
တေဇ ရဲ့စီးပွား အင်ပါယာ အတွင်းစည်း (၁) ခွန် ဒီးယမ် လုလု ခေါ် ကွမ်းလု ချမ်း ခေါ် ဇော်မင်းသည် Air Bagan တွင် ဒုဥက္ကဌ များ အဖြစ် ဆောင် ရွက် သူ ဖြစ်ပြီး အာဏာပိုင် က မျက်နှာသာပေး...
ယမမင်း၏ခွေးရေပုရပိုက် - The Scroll နောက်ဆုံးပါးကွက်သား ------------- ထိုင်းနိုင်ငံမှာ သေဒါဏ်ကျခံရသူတွေကို သေနတ်နဲ့ပစ်သတ်ပေးရတဲ့ အလ...
(မိန်းကလေးများမဖတ်သင့်သော ဟာသ များ)
ကဗျာရွာငယ်လေး (မိန်းကလေးများမဖတ်သင့်သော ဟာသ များ) "မော်တော်ကားပျက်တဲ့တရုတ်ကြီး" မြန်မာစကားလည်လည်ဝယ်ဝယ်မတက်တဲ့ တရုတ်အမ...
Andrew Myo Aung အကြမ်းဖက်ဖို့မဟုတ်ဘူး..အမှ န်တရားအတွက် ကျနော်တို့ ဘာကိုကြောက်နေရမှာလဲ... . ဗိုလ်မှုးကျော်စွာဝင်း...
Zaw Myint Aye သူမကို နားမလည်ကြသူများ ================== (၁) ကမ္ဘာကျော်ရုပ်ရှင်မင်းသမီး (Angelina Jolie) အင်ဂျလီန...
စုချစ်သမီး added3new photos . July6at 11:03am · ဦးနေဝင်းသမိုင်းကြောင်း ဇတ်သိမ်းမကောင်းခြင်း*** ====== ငယ်စဉ်က မြန်မာ...
Monday, September 17, 2012 at 3:21 AM အားပေး သူများ၏ ခြေရာ လေးတွေ 7.2.2014